DAAHA LAGA ROGAY: Fallanqeeye ka tirsan telefishinka Manchester United oo faafiyey sababta dhabta ah ee keydka loo dhigay Paul Pogba – Gool FM
DAAHA LAGA ROGAY: Fallanqeeye ka tirsan telefishinka Manchester United oo faafiyey sababta dhabta ah ee keydka loo dhigay Paul Pogba
Kaafi March 7, 2018
(Mancehster) 07 Mar 2018. Sheekooyin badan oo daahsoonaa ayuu daaha ka qaaday fallanqeeya telefishinka Manchester United Gary Pallister.
Gary Pallister oo ka hadlayey barnaamij axadda uu soo gala telefishinka MUTV ayaa ka warramaya ciyaaryahanada bixn kara, kuwa imaanaya iyo mushkilaadka haysta United.
Qodobkii ugu weynaa ee uu fallanqeeyey waxa uu ku saabsanaa Paul Pogba.
Jose Mourinho waxa uu hore u xaqiijiyey in qaab ciyaareedka Pogba hoos u dhacay waxa uuna keydka dhigay ciyaartii Sevilla ee Champions League-ga.
Arintaas waxa ay abuurtay warar sheegaya in labadooda si shaqsiyadeed isu hayaan.
Hase ahaatee, Pallister waxa uu sheegay in Pogba safka kowaad looga reebay akhlaaq la’aan ku saabsan gudaha garoonka maadama uusan sameyn waxa uu rabo tababaraha ee aysa jirin xurguf u dhexeysa isaga iyo Mourinho.
Waxa uu yiri: “Wuu xoog badan yahay, waa khad dhexe ad adag. Waxaan qabaa in uu doorbido ka ciyaaridda garabka biddix ee dhex saddex ah. Laguma haysto marka uu kubadda haysto laakiin waa marka uusan kubadda haysan.
“Aragti fiican ayuu leeyahay, Jose waxa uu isku dayayaa in uu ka dhigo kuwo fiican marka aysan kubadda haysan, raacdaan kubadda oo ay soo qaataan, laakiin ma aha mid ay hadda ku fiican yihiin.
“Adabaad badan ayuu u baahan yahay waana sababta Pogba loo fariisiyey. Waxaan qabaa xanta ah in ay xurguf jirto in ay qashin tahay, wuuna ciyaaray kulankii Chelsea.
“Ciyaarta kubadda wuu haysanayey waxa uuna ku biirayey weerarka, waana marka uu ugu fiican yahay, waxaan taas ogaaday waqtigii Sir Alex in aad sameyso waxa tababaraha rabo haddii kale banaanka ayaa lagaaga soo tagayaa.”
Taageerayaasha Juventus oo baraha bulshada baallaha uga rifay Dani Alves + Sawirro (Maxay ku maageen?)
"Si aad u guuleysato waa inaad u ciyaartaa Real Madrid...".